Diyo post :: यी हुन् आफैलाई गोली हान्न लगाउने धर्म गुरु आचार्य श्रीनिवास, पक्राउपछि यस्तो छ अवस्था ! यी हुन् आफैलाई गोली हान्न लगाउने धर्म गुरु आचार्य श्रीनिवास, पक्राउपछि यस्तो छ अवस्था ! - Diyo post
यी हुन् आफैलाई गोली हान्न लगाउने धर्म गुरु आचार्य श्रीनिवास, पक्राउपछि यस्तो छ अवस्था !
काठमाडौं– केही महिनाअघि विराटनगरमा एक धर्मगुरुमाथि भएको गोली प्रहारको घटनाले नयाँ मोड लिएको मात्रै छैन दुनियालाई अचम्म बनाइदिएको छ । पूर्वराजाका निकट मानिने श्रीनिवास आचार्यले आफैलाई गोली हान्न लगाएको पाइएपछि उनको चौतर्फी आलोचना भएको छ । चर्चित धर्मगुरु श्रीनिवास आचार्यमाथि उनकै योजनामा गोली प्रहार भएको खुलेको हो । प्रहरीले उक्त घटनामा आचार्यकै मिलेमतो रहेको पाएपछि दिल्ली जानका लागि त्रिभूवन विमानस्थल आएका आचार्यलाई विमानस्थलबाटै पक्राउ गरेको छ ।
प्रहरीले पक्राउ गर्ने थाहा पाएपछि उनी दिल्ली भाग्ने योजना अन्तर्गत विमानस्थल पुगेका थिए । तर, बिराटनगर प्रहरीले उनलाई विमानस्थलबाटै पक्राउ गरेको छ ।
हिन्दु राष्ट्रको आन्दोलन उचाल्नका लागि केही गर्दा पनि उपाए नलागेपछि उनले स्वयंमलाई गोली हान्न लगाएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ ।
उनले माधव चौधरीलाई गोली हान्न लगाएका थिए भने पेस्तोल र गोली व्यवस्थापनका लागि लक्ष्मिराज अधिकारीलाई अह्राएका थिए ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको समेत समलग्नतामा भएको अनुसन्धानबाट यस्तो तथ्य बाहिर आएको हो । गोली प्रहारको घटनामा समलग्न २ जनालाई प्रहरीलेि तीन दिनअघि चितवनबाट पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेका उनीहरुले आफूहरुलाई धर्मगुरु श्रीनिवास आचार्यले गोली हान्न लगाएको बयान दिएका थिए ।
मोरङ प्रहरी प्रमुख अरुण कुमार विसीका अनुसार आचार्यलाई भोली जिल्ला अदालत मोरङमा म्याद थप गरी अनुसन्धान थालिने छ । ‘हामी सरकारी वकिलसँग समन्वय गरिरहेका छौँ । आजै म्याद थप गरी अनुसन्धान हुने समय छैन । भोली नै हामी जिल्ला अदालतमा पेश गछौँं,’ उनले दियोपोस्टसँग भने,‘उहाँलाई हिरासतमा राखिनेछ ।’